Global Voices teny Malagasy » Rosia: Ny zava-niainan’ny mpitoraka bilaogy Isiraeliana tany amin’ny Hopitaly Rosiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Septambra 2010 19:06 GMT 1	 · Mpanoratra Vadim Isakov Nandika zhhantar
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Saripika, Tsidika, Akon'ny RuNet
Ny lalantsaran'ny hopitaly "malaza"-n'i Voronezh. Sary nalain'i dorinem.
Betsaka ireo olona miaina ny fiainany ka tsy manam-potoana akory ny hijery ireo zavatra fahita amin'ny andavanandro amin'ny fomba fijery vahiny. Indraindray mila mankany ivelany ianao vao mahalala kokoa ny zavatra nataonao na tsia tany an-tranonao. Fa indraindray kosa, vahiny mitoraka bilaogy mikasika ireo zavatra niainany tany amin'ny hopitaly no mamaritra “ny marina manindrona” mikasika ny firenenao.
Na dia tsy hoe “vahiny” loatra aza no tena teny famaritana mety ho an'ny mpitoraka bilaogy, i dorinem [RUS] izay teraka tany Ukraine ary nandany 16 taona tany talohan'ny nifindrany tao Isiraely izay nahitany trano vaovao indray tamin'ny taona 1993. Miteny Rosiana misosasosa ny tovovavy ary fantany ny lalana manodidina ny Firaisana Sovietika. Nandeha tany Rosia izy vao haingana nitsidika ireo havany. Fa faharatrana tampoka no nanova ireo drafitry ny diany ary nentina tany amin'ny hopitaly tany Voronezh  [ENG] izy , tanàna any Rosia Atsimo andrefana .
Mamaritra ny tantaram-piainany tao amin'ny hopitaly Rosiana i Dorinem ao amin'ny LiveJournal.com, toeram-piseraseran'ny bilaogy malaza indrindra eo amin'ny firenena. Lasa nalaza tao anatin'ny andro vitsivitsy ireo lahatsoratra tao amin'ny bilaoginy. Niafara tany amin'ireo pejin'ny gazety sy gazety boky ireo fahatsiarovany sy ireo oha-pitenenany. Niitatra nanjary adihevitra nivelatra teo amin'ny firenena ireo resadresaka nanomboka tao amin'ny bilaoginy mikasika ny kalitaon'ny fikarakarana ara-pahasalamana any Rosia. Ary na dia tsy zava-baovao loatra ho an'ireo mponina maro any Rosia aza ny zavatra rehetra nofaritan'i dorinem tao, nanjary nanohana mafy ny olona mihitsy ny nahita fa tsy araka ny tokony ho izy ny ny zavatra ratsy nahazatra azy ireo.
Ny Sabotsy no nanomboka narary ny vehivavy ka nanomboka ho tena faran'izay sarotra ny mahita fanampian'ny matihanina. Ity ny fomba nanehoany ny zavatra niainany voalohany tany amin'ny hopitaly :
Пока ждали, я смотрела по сторонам, и глаза мои лезли на лоб. Во-пе%D
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/09/02/8658/
 dorinem : http://dorinem.livejournal.com/profile